အခွန်နုံးထားများပြောင်းလဲသတ်မှတ် (Eleven Media မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အခွန်နုံးထားများပြောင်းလဲသတ်မှတ် (Eleven Media မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
အခွန်နုံးထားများပြောင်းလဲသတ်မှတ် (Eleven Media မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 28, 2012 in Myanma News | 13 comments
ဇယားတွေပါမလာခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီ့ လင့်ခ် မှာ သွာကြည့်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဒီအထဲမှာ ဇယားတင်ချင်ရင် ဘယ်လိုတင်ရလည်း မသိ၍ လမ်းညွှန်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ကောက်ခံမည့် ၀င်ငွေခွန် အခွန်နှုန်းထားဇယား
လစာဝင်ငွေအပေါ် ကောက်ခံမည့် ၀င်ငွေခွန် အခွန်နှုန်းထားဇယား
အီလဲဗန်းမီဒီယာနဲ့.. သူတို့ရဲ့အလုပ်/အချိန်ကို ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်နော…
မြန်မာပြည်ထဲ..ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ရနေတယ်.. သေသေချာချာမသိတာမို့.. ၀င်ငွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. သိပ်ဝေဖန်လို့မရပါဘူး..
စီးကရက် ၁၀၀%နဲ့.. ဆေးလိပ်..အရက်တွေ.. ၅၀% ချတာ.. ကောင်းတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဆေးလိပ်/အရက်အနွယ်..ရောင်းဝယ်သူတွေကို.. လိုင်စင်ကြေး..ကြီးကြီးနဲ့..ထပ်ချသင့်ပါတယ်..။
. သတ်သတ်မှတ်မှတ်.. အဖွဲ့အစည်း.. NPO/NGO ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ပေးတဲ့.. အလှူငွေအပေါ်မှာလည်း… အမြတ်ခွန်အတွက်စဉ်းစားသင့်တယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အဲဒါတွေကိုလှူရင်..လှူတဲ့ငွေအပေါ်.. အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါတယ်..
အဲဒါမျိုးလုပ်ပြီး.. NGOတွေအလုပ်ကို ထွန်းကားအောင် အစိုးရအနေနဲ့.. တွန်းအားပေးသင့်တာပေါ့..။
ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဆီတွေ ဈေးတော်တော်ချပေးလိုက်တာဘဲ။ ပြည်သူတွေ အမြတ်ထွက်မလား ။လုပ်ငန်းရှင်တင်သွင်းခွင့် ရသူတွေဘဲ အမြတ်ထွက်မလားတော့ မသိဘူး ။
ကုန်သွယ်ခွန် ဒီလောက်ချပေးလိုက်ရင်တော့ နဂို ကဆောင်တဲ့ ဈေးနဲ့ တွက်တာဆို ဈေးကျသင့်သည် ထင်ပါတယ် ။
အဲ နဂိုက ပေးမလာတာတွေ ပေးရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ ပိုတက်သွားမယ်ထင်ပါသည်။
အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပေးတဲ့ ကျေးဇူးပါ။
အခွန်ကောက်ခံနှုန်းတွေ ပြဌာန်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီ … တကယ်တမ်း အခွန် စည်းကြပ်မှုလည်းရှိသင့်ပါတယ် … ။ အခွန်စည်းကြပ်မှုကလည်း … ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ တစ်သားထဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် … ။ အခွန်သေချာကောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ထည့်သုံးသွားလျှင်တော့ အချိန်ခဏလေးအတွင်း အများကြီး တိုးတက်လာမယ်လို့ မြင်မိပါတယ် … ။
အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ. သတင်းအချက်အလက် ပို.စ်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
သတင်းကတော့ ထူးပ ဗျာ…
ဆေးလိပ်၊အရက်တွေ ဈေးတက်အုံးမယ်ပေါ့… ကောင်းပါဒယ်..
အားမနာတန်းပြောရရင် ကားဈေး နဲနဲ ထပ်ကျရင် ပိုကောာင်းမလားလို့..။
ဒါကတော့ တဖက်သတ် အတွေးပါ …။
မှားမယ် မှန်မယ် တော့မသိပါ…။
ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဈေးတွေ လျော့ရင်တော့ ကားမဝယ်နိုင်သူတွေ အတွက် TAXI နဲ့ BUS ကားခ
လျော့မယ် တွေးမိပြီး ဝမ်းသာမိကြောင်းပါ…။
ဒီမှာလဲ ဒီနှစ် စီးကရက် ကို အခွန်တိုးကောက် တယ်။
စီးကရက် ဈေးတွေ တက်ကုန်တယ်။
လူတော့ စီးကရက် အသောက် ရော့မရော့ တော့ မသိ။
အရင်ကထက် အများကြီး စဉ်းစားပြီး ပြင်ပေးထားတာပဲ။
လိုအပ်ချက်တွေ ရှိရင်လည်း တဖြည်းဖြည်း ပြင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
ကထူးဆန်းနဲ့ သူကြီးကို ကျေးဇူးပါ။
သူကြီးနှင့် Eleven Media သို့ တောင်းပန်ပါသည်။
အများသူငါ သိစေချင်သော စေတနာ သက်သက်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့အတတ်ပညာ၊ အချိန်၊ လူအင်အားနှင့် ငွေကြေးများကို အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရယူထားသော တန်ဖိုးရှိသော သတင်းများ ကို မှီုငြမ်း ကိုးကား၍ မိမိပိုင် လုပ်ယူဖော်ပြခြင်းသည် ပိုမို ဆိုးရွားသော မူပိုင်မှု့ကျုးလွန်သည်ဟု ရိုးသားစွာ ယူဆမိသောကြောင့် Eleven Media မှ ဖော်ပြထားမှု့အား မခြွှင်းမချန် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
Eleven Media မှ ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
နောင် မည်သည့် သတင်းဌာန များမှ သတင်းများ အား ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းပြုလုပ်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ၀န်ခံဂတိပြုပါသည်။
4. ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
စည်းကမ်းထဲ.. ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ လို့ရေးထားတာ.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၃နှစ်လောက်ကတည်းကပါ..
အဲဒီတုံးက.. မြန်မာပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့.. ပြည်ပမီဒီယာတွေအချိပ်အဆက်မရှိသေးတာမို့.. အချိပ်အဆက်ရှိအောင်.. ပြည်တွင်းမီဒီယာကို ထည့်မရေးထားတာလို့ပဲ.. ဆိုပါစို့..
ဆိုတော့.. အဲဒီစည်းကမ်း ၄ မှာ… ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာအစား.. အခြားမီဒီယာလို့.. ပြင်လိုက်ပါမယ်..
အီလဲဗာန်းမီဒီယာက.. အယ်ဒီတာနဲ့တာဝန်ရှိသူများ.. အီးမေးလ်သိရင်..ကျုပ်ကို ပေးကြပါလားခင်ဗျ…
အနည်းဆုံးတော့.. Fair use ကိုရအောင်တောင်းကြည့်ပါ့မယ်..။
သူကြီးရေ .. သူတို့ ဆိုဒ်သွားပြီး contact ကနေ တစ်ဆင့်ရေးမှ သာ ရမယ်ထင်ပါသည်။
သူတို့ ဂျာနယ် ၀ယ်ပြီးရှာတာလည်း မတွေ့ပါ ။ ဖုန်းနံပါတ်သာ ပါ၍ လှမ်းမေးတော့ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် (သို့) ဦးဝေဖြိုး e-mail လိုချင်လို့ ဆိုတော့ ဘာကိစ္စလဲ မေးပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော် web site မှာ ကူးတင်လိုက်လို့ တောင်းပန်စာ ပို့မလို့ လိုပြောတော့ reception မှ မို့လိုသူမသိပါ ။ လူကြီးများကို မေးပြီး ဖုံးပြန်ဆက်ပေးပါ့မယ်ပြောပြီး ပြန်မဆက်ပါ။
So sorry ပါသူကြီးရေ ။ ကျွန်တော့်ကြောင့် အလုပ်ရှုပ်ပြီးကြားက တောင်းပန်ရဦးမှာ ။ ကျွန်တော်လည်း သင်ခန်းစာ တစ်ခု ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့ကြေညာချက်မှာတော့ တောင်းပန်စာ ရေးထားခဲ့ပါသည်။
အီလဲဗန်းဝက်ဘ်ဆိုက်က.. RSS ထုတ်ထားတဲ့..လင်ခ်နဲ့စာတချို့.. အဲဒီအထိတော့ ကူးတင်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိပါလိမ့်မယ်..
နောက်တခုက.. Fair Use
အဲဒါတွေက.. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီဒီယာတွေမှာ.. သဘောတူထားတာတွေဖြစ်တတ်လို့ပါ..